July 2019 - Page 5 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa maanta oo Talaado ah lagu wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya. Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha ciidamada Daahir Aadan Cilmi oo loo yaqaan Indhoqarshe ayaa maanta […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in si aan dhammeystirnayn uu u sii wadi doono taageerada ammnaaka ee uu siiyo ciidamada qaranka Soomaaliya. Bayaan maanta oo Talaado ah ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya, ayaa […]
July 1, 2019 Puntland Mirror 0
Somalia protested formally to Kenya, the foreign ministry in Mogadishu said Monday, after Nairobi referred to the self-proclaimed Republic of Somaliland as a country. Somaliland declared its independence in 1991 but is not recognised by […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta oo Isniin ah duulimaad todobaadle ah ka bilowday magaalada Muqdisho. Munaasabada furitaanka ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, halkaas oo diyaaradii ugu horeysay ee ka socota […]